မောင်ဆာမိနှင့် အမည်းရောင်စာမျက်နှာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မောင်ဆာမိနှင့် အမည်းရောင်စာမျက်နှာများ
Posted by မောင်ရိုး on Jul 22, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 50 comments
ကျနော်၏ အဖြူရောင်စာမျက်နှာတို့မှာ ကုန်လောက်ရှိနေပါပြီ ။
ဝါသနာသည်ကား တားလို့မရသေး ။
ထို့ကြောင့် ထိန်ချန်ထားခဲ့သော အမည်းရောင်စာမျက်နှာတို့ကို ပြန်လည်၍တူးဖေါ်မိပြန်တော့သည် ။
ဖတ်မိသူတို့အတွက် စိတ်ပျက်ညစ်ညူးဖွယ်များ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း
စာရေးချင်သည့်ရောဂါအားကုစားရန်မှာ တခြားနည်းလမ်းရှာမတွေ့သေးသဖြင့် …………… ………
အင်းစိန်လမ်းတလျောက်မောင်းနှင်လာသော ၄၅ ဘတ်စ်ကားသည် လှည်းတန်းမှတ်တိုင်တွင်ထိုးရပ်လိုက်သည် ။
ငပိ ငါးချဉ်သိပ်သလို ကြပ်ညှပ်နေသော ဘတ်စ်ကားအတွင်းမှ လူအုပ်ကြီးသည် လွတ်လပ်ရေးရသည့်နှယ် အလုအယက်တိုးထွက်လာကြသည် ။
ထိုလူအုပ်ထဲတွင် မောင်ဆာမိနှင့် ထိုစဉ်က ရီးဇား(ယ္ခု ဇနီး) ဖြစ်သူတို့လည်းပါလာလေသည် ။
ရှေ့မှ လမ်းရှင်း၍ တိုးထွက်နေသော မောင်ဆာမိသည် နှေးတုန့်တုန့်ဖြစ်နေသော ချစ်လှစွာသော မဟေသီအလောင်းအလျာအား လက်ကိုအတင်းဆွဲလျှက် တိုးထွက်လိုက်ပါတော့သည် ။
” မြန်မြန်ဆင်းဟ တော်ကြာ စပယ်ယာတွန်းချနေဦးမယ် “
အောက်ရောက်သော်လည်း အဆင်းအတက်များ ရှုပ်ထွေးနေသဖြင့် လူအုပ်နှင့်ဝေးရာသို့ ခတ်သွက်သွက် ဆွဲခေါ်လာခဲ့သည် ။
“မင်းက အရမ်းနှေးတာဘဲ ကွာ …… လာ လာ ဟိုနားမှနေရိပ်တယ် …” ဟု မည်တွန်တောက်တီးလျှက် ………
ထိုစဉ် ……… နောက်နားဆီမှ ……
” ခစ် ခစ် ………”” ………
” အဟီးးး ဟီးးးးး ဟားး ဟားးး ……”
ဟူသော ရီသံတို့ကိုကြားလိုက်ရသည် ။
“”ခစ် ခစ် “ ဟူသောအသံသည် ကျနော်မကြားဖူးသောအသံဖြစ်သည် ။
” ဟီးဟီး ဟားဟား “ ဟူသောအသံမှာ မဟေသီအလောင်းအလျာ၏အသံဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ …နောက်သို့ ဆတ်ကနဲ လည့်ကြည့်လိုက်သည် ။
“”ဗုဒ္ဓါ !!!!!!! “””””
ရုတ်တရက် မောင်ဆာမိ အသက်ရှူကျပ်သွားသည် ။
တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးမသိဖူးသူ ကောင်မလေးတစ်ယောက်၏လက်ကို ဆွဲလျှက်သား ဖြစ်နေသည် ။
အလျှင်အမြန်ပင် “ဆောရီး” ပေါင်းများစွာကို စက်သေနတ်ပစ်သလိုပြောနေမိသည် ။
ထိုမှတပါးလည်း ပြောစရာမရှိပေ ။
ကောင်မလေးမှာ ပြုံးစိစိနှင့်ထွက်သွားသည် ။
မောင်ဆာမိ၏ချစ်သူ (ယ္ခု ဇနီး) မှာ တခွီးခွီး နှင့်မျက်နှာပိုးသပ်မရ ။
“” မင်းးကွာ …… ကားပေါ်ကဆင်းကတည်းကပြောပါလား ……အခုတော့ကွာ … ကံကောင်းလို့ ……””
“..… ပြောချိန်မှမရတာ … သူပဲ အတင်းဆွဲပြေးပြီးတော့ … နောက်လည်းလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ …”
မဟေသီအလောင်းအလျာသည် ထိုနေ့ တစ်နေ့လုံး သတိယတိုင်းရီနေပါတော့သည်း ။
ကွန်မန်ဒါ ဆာမိ ~~~
ယ္ခုနှစ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသည် အောက်မေ့တသဖွယ် နေ့ရက်များကိုပြန်လည်သတိယလျှက် ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ ။
မောင်ဆာမိတို့ ငယ်စဉ်က အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို ကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည် ။
စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ ၊ ဟောပြောပွဲများ နှင့် ချီတက်အလေးပြုပွဲများကို လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါ၏ ။
ရပ်ကွက် ကျေးရွာအလိုက် ၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲကြလေသည် ။
ပွဲတိုင်းကျော် မောင်ဆာမိလည်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးသည်ပေါ့ ။
ထိုစဉ်က မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမှ ဘရိန်းဝပ်ရှ် လုပ်သည့်အနေဖြင့် မူလတန်းအဆင့်အား တေဇလူငယ် ၊ အလယ်တန်းအဆင့်အား ရှေ့ဆောင်လူငယ် ၊ အထက်တန်းအဆင့်အား လမ်းစဉ်လူငယ် ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပြီးလျှင် လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ပုံဖေါ်ခဲ့ကြလေသည် ။
ယခုကဲ့သို့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အလိုက် ချီတက်အလေးပြုကြသည်ပေါ့ ။
ထိုစဉ် မောင်ဆာမိသည် အလယ်တန်းကျောင်းသား ရှေ့ဆောင်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါသည် ။
ထို့ကြောင့်…… အောက်ပါ ဖြစ်ရပ်တို့သည် ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြောပြစရာဖြစ်လာခဲ့လေတော့သည် ။
၁၉၈၀ ကျော်များကာလ ……
တစ်ခုသော အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား ……
ယခုနှစ်ချီတက်ပွဲတွင် ကျောင်းသူားများ၏ဘင်ခရာအဖွဲ့ ၊လမ်းစဉ်လူငယ်အဖွဲ့နှင့် ရှေ့ဆောင်လူငယ်အဖွဲ့များ ပါဝင်ဆင်နွဲကြမည်ဖြစ်သည် ။
မောင်ဆာမိအား ရှေ့ဆောင်လူငယ်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ရာထူး ပေး၍ချီတက်စေမည်ဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့် အာဇာနည်နေ့မတိုင်မှီ တစ်ပတ်ကြိုတင်၍ ကျောင်းဘောလုံးကွင်းတွင် စစ်ရေးပြများလေ့ကျင့်ရလေတော့သည် ။
“…… ဗိုက်… ညာ … ဗိုက် … ညာ … ဗိုက် ညာ … ဗိုက် … … “ (ဘယ် ညာ ဘယ် ညာ ဟု )
ဟူ၍ ညာသံပေး၍ လည်းကောင်းးးးးး
“…… ကျဆုံးလေပြီးသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးးးးးး ပြု …” အကြိမ် ကြိမ် လေ့ကျင့််ခဲ့ကြသည် ။
တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မောင်ဆာမိမှာလည်း သတိ သက်သာ အေးစေ စသောအမိန့်ပေး တိုင်ပင်မှတ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် အိမ်၌မှန်ကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်ရလေသည် ။
ရင်ခေါင်းသံဖြင့် အာခေါင်ခြစ်၍အော်လိုက်သော ” တပ်ဖွဲ့… ဒိ” (တပ်ဖွဲ့သတိ) ဟူသောအသံမှာ မောင်ဆာမိ၏ အိပ်ခန်းတွင်းမှ မကြာမကြာ ထွက်ပေါ်လာတတ်လေတော့၏ ။
” … အလေးးးးးးး ပြု ………… နေ ……မြဲ … ” ဟုလည်း ကြားရတတ်ပြန်ပါသည် ။
ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် နံနက် 10:00 :
အခမ်းအနားကျင်းပရာ ကွင်းအတွင်းသို့ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ကျောင်းသားများ ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာလူထုများ တဖွဲဖွဲ ဝင်ရောက်လာလေပြီ ။
မောင်ဆာမိတို့ ရှေ့ဆောင်လူငယ်အဖွဲ့သည်လည်း စနစ်တကျ နေရယူလိုက်ကြသည် ။
ကျောင်းဘင်ခရာအဖွဲ့မှ စစ်သီချင်းများ တီးမှုတ်နေကြသည် ။
အသံဗလံများ တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် ငြိမ်သက်နေသည် ။
ဆွဲဆွဲငင်ငင် ဖြင့်စတင်လိုက်သောဥသြ သံနှင့်အတူ အားလုံးအလေးပြုကြသည် ။
အမျိုးအမည်မဖေါ်ပြနိုင်သော ဝေဒနာတရပ်နှင့်အတူ … ဝမ်းနည်းသယောင် ခံစားရသည် ။
ဥသြသံအပြီးတွင် အဖွဲ့အသီးသီး အလေးပြု၍ပြန်လည်ထွက်ခွါကြပါသည် ။
သို့နှင့် ………… မောင်ဆာမိဦးဆောင်သော ရှေ့ဆောင်လူငယ်များအလေးပြုရန် အလှည့်ကျလေပြီဖြစ်သည် ။
မိုက်ကရိုဖုန်းရှေ့တွင် မာန်ပါပါဖြင့်နေရာယူလိုက်သည် ။
“” တပ် ဖွဲ့ ……ဒိ”‘ (တပ်ဖွဲ့ သတိ)
“…… ကျ ဆုံး လေ ပြီးသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာ ဇာ နည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ….. အလေးးးးးးးးးးးးးးး ပြု .……”
ခေါင်းများငုံ့လျှက် အလေးပြုကြသည် ။ စက္ကန့် ၂၀ ခန့်တွင် ‘နေမြဲ’ ဟု ပြောရမည် ဖြစ်သော်လည်း ကွန်မန်ဒါဆာမိမှာ ‘နေမြဲ’ ဟူသောစကားလုံးကိုမေ့နေလေပြီ ။
ခေါင်းများပူအောင် အလျှင်အမြန်စဉ်းစားသည် ။
စက္ကန့် ၃၀ သို့ တိုင် စဉ်းစားမရ ။
စက္ကန့်မှသည် မိနစ်သို့ကူးပြောင်းလာခဲ့ပါပြီ ။
အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါသော်လည်း ပါးစပ်ထဲတွင် စားကားလုံးများပျောက်လို့နေသည် ။
ရှေ့ထွက်၍ပန်းခွေချပြီး အလေးပြုနေသော ရှေ့ဆောင်လူငယ်များမှာလည်း သို့လော သို့လော တွေးနေကြမည်ထင်၏ ။
တစ်မိနစ်ကျော်လာသည်နှင့် ပွစိပွစိ အသံများထွက်လာသည် ။
ယခုထိ နေမြဲ ကိုစဉ်းစားမရ ။
နှစ်မိနစ်ခန့်ရှိပြီမို့ မဖြစ်မနေ တစ်ခုခုတော့ပြောရပါတော့မည် ။
ထိုစဉ် …စစ်ရေးပြသင်တန်းမှတပ်ကြပ်ဆရာ၏ စကားက်ိုပြန်လည်ကြားယောင်မိလေသည် ။
” ရဲဘော်တို့ … ရဲဘော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာ ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး ၊ ရေပါတာဘဲလိုချင်တယ် “
ဟုတ်ပြီ ။မောင်ဆာမိတစ်ယောက် ရေဘူးပေါက်နေသော်လည်း ရေရှာရပါတော့မည် ။
သို့နှင့် …… ရှေ့မျက်နှာနောက်ထား၍ အောက်ပါအတိုင်း အော်လိုက်လေတော့သတည်းးးးးးးးးးး ။
“””” ခေါင်းး ပြန် ………… မော့ “””””
ဒီလူကြီး မနက်စောစော မျက်နှာပိုးသတ်လို့မရအောင် လုပ်သွားတယ်
လက်ကိုဆွဲပြီး ဆင်းလာတော့ ကိုင်ရတာ မတူပါဘူးလို့ မထင်ဘူးလား ဟင်
နေမြဲ ကို မေ့နေရင် သက်သာ တွေ အေးစေ တွေ အော်လိုက်တာတော့ မဟုတ်
ဟားဟားဟားးးးးး …. ရယ်လိုက်ရတာ …
ဟဲဟဲ ပေါက်ကရပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်လေ
အခမ်းအနားပြီးတော့ ဦးဆာအဆူမခံရဘူးလား.. မနက်စောစောစီးစီး..ရီလိုက်ရတာ…
တခါထဲကို ရာထူးပြုတ်တော့တာဘဲ ဟေးဟေး
မဒမ်ဆာ မို့ ရီနိုင်တယ်။ ဟိ၊
ကိုယ့်လိုသာဆို လိုက်မဆင်းဘူးးး ထားပစ်ခဲ့မယ်။
ယောက်ခမ ကွန်မန်ဒိုဆာ ဖြတ်ထိုးဉာဏ် ကောင်းတယ် ဆိုတာတော့ ကိုယ်တွေ့မို့ ယုံတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့စ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်က ကူညီချွန်တွန်း အဲ …အဲ မှားလို့
ဇီဇီခင်ဇော် အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းးးးးး
ဟဲဟဲ လွဲချက်ကလက်ကုန်ဗျ ကိုနောင်ရိုးရဲ့
တော်သေးတာပေါ့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာမို့ မတော် ရုပ်ရှင်ရုံအ၀င်မှာသာ မှားဆွဲမိတာဆို ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ မပြောတတ်ဘူးနော်။
ရုပ်ရှင်ရုံအဝင်မှာဆို ဘာပြောကောင်းလိမ့်မလဲဗျာ …
ကိုရင်ဆာလို သာယာတဲ့ “တစ်ခါက” တွေ မရှိခဲ့ဖူးလို့ ကြွားစရာမရှိ… ဟီ ဟိ
“အဲ့လူဂျီး မှားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆွဲသွားတာ” လို့…
ဗိန် ညောင်… ဗိန် ညောင်… ဗိန် ညောင်… ရှေ့ကြည့်… ညာာာာ…. ညှိ
တိန် !!!¡¡¡ အဲဒီလို မချွန်ကောင်းဘူးလေ
တော်ကြာ ၁၄၄ ထုတ်နေမှဖြင့်
ဟဲဟဲ ရေဘူးပေါက်ကိုပြန်အဖါကောင်းလိုက်တာ …
မတူဘူးလေ မတူဘူး မတူဘူး ဟဟ
ခေါင်းမော့…. ခေါင်းး ပြန် ………… မော့ ခိခိ
တော်သေးတယ်… အလင်းဆက်တို့လို ဂျော်လကီ မှားမဆွဲလာလို့ …ငိငိ..
ခီညားရဲ့ ကနားမှာ… နတ်ကဒေါ် လိုသလား… ။
နတ်ကတော် တော့ မလိုဝူး ..သငယ်ပဲလိုတယ်…
ဂျော်လကီတော့ မဆွဲပါရစေနဲ့ ဂစ် ဂစ်
အောင်မယ်လေးရီလိုက်ရတာ အူးဆာရယ်။ ခွက်ခွက်ကိုလန်ကောပဲ။ အဲ့လက်ဆွဲတဲ့ကိတ်စနကတော့ ဦးဆာဦးသွားသကိုး။ အဟိ ကျွန်မလဲတေးထားတာ ရေးဖို့။ ကျွန်မလွဲတာကတော့ သားနဲ့ ဘယ်ကယောင်္ကျားကြီးမှန်းမသိဘူးမှားဆွဲတာ။ အကုန်ကတော့ မယုံပါဘူး လက်သေးသေးနဲ့လက်ကြီးကြီးတမင်မှားဆွဲတာဆိုပြီး အဲ့တုန်းကလဲတောင်းပန်လိုက်ရတာ ရှက်လဲရှက်ပေါ့။ ခုလဲကွ့ကိုယ်ပြန်မြင်ကြည့်ပြီးရီလိုက်ရတာ။
ချွေးမ အလွဲ က ရွေးလိုက်တဲ့ ယောက်ခမွ ၂ ယောက်လုံး အလွဲတွေ။
အာဟိ (ခွက်ဒစ်တူ ကျောက်)
အမှတ်တရ အမှားများက်ုစီးရီးအလိုက် စောင့်နေမယ်နော
အဟမ်း အဟမ်း….ကျနော်အထင်တော့ ကောင်မလေး က လက်မှားကိုင်ခံရမနဲဘူးဆိုပြီး
ငြိမ်ခံနေလားမသိ..ဦးဆာတို့ စွံချက်တွေထွက်ထွက်လာပီ…ဦးဆာရဲ့ အမည်းရောင်စာမျက်နှာပေါ်
မှာ အလင်းကွက်တွေ တွေ့ နေတယ်နော…..
ကျနော်ကိုက ဆင်းချင်ဇောများပြီး အတင်းဆွဲချသွားမိတာပါ
အဲ့ဒီရှေ့ ဘယ်သောအခါမှာ မကြည့်ဘဲ မဆွဲရဲတော့ပါဘူး ဟေးဟေး
ဟိုတစ်ယောက် ပြောကတည်းက ဖတ်ချင်နေတာ
အခုမှ ဖတ်ရတယ် …
ရေလည် မိုက်တယ် ဥဆာ ….
ခေါင်းပြန် .. မော့ … တဲ့ … ဟီဟိ …
ဒါနဲ့ … ဥဆာရဲ့ ပထမ အလွဲလေးလို …
ကျော်လည်း အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘဝက လွဲခဲ့ဖူးသေးတယ်ဗျ …
အဲ့ဒီတုန်းက ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ …
ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အမှတ်နဲ့ လက်ဆွဲပြီး ခေါ်သွားဖူးလေရဲ့ …
တော်ဒေးဒယ် .. ကောင်မလေးက အေးဆေးမို့ …
တမင်များ မှားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆွဲသလားကွာ
ကောင်မလေးရဲ့ အ၀ှာ ( ပိုက်ဆံအိပ်) မှားဆွဲမိမှ ဒုက္ခ
အဲ့သလိုတော့ မမှားပါရစေနဲ့ အန်တီနိုဗွီရယ်
အဖြူ အမဲ အပြီး ဆက်လာမဲ့ ရောင်စုံ စာမျက်နှာများ ကို မျှော် နေပါတယ်။
ကိုယ်လဲ ဘယ်သူ ကို လက်ဆွဲဘူး လဲ စဉ်းစားနေတယ်။ ;-)))
ကိုယ့်ကို လာဆွဲ လို့ကတော့။ ဘာ ဆင်ခြေ မှ မကြားချင်ဘူး။
သများက ဂျူဒို ခါးပါတ်နက် ရှင့်။
“ခေါင်းပြန်မော့” လို့ အော်လိုက်သံ က နားထဲ ဂလိထိုးပြီး ဝင်သွားတယ်။ lol:-)))
မတော် တွန်းချလိုက်ရင် မှောက်လျက်လဲနေမှာ
အရီးမှာ အမြဲဆောင်ထားတတ်တာ ဘာ ဆိုလားပဲနော်
တစ်ချိန်က ကွကိုယ် ဘဝင် လေဟပ်ပြီး အရူးထဆောင် ထားခဲ့တာပါ။
နောက် ဈေးကျကျလာချိန် ဈေးကွက်ပျက်မှန်း သိလာတော့ မသိမသာ ကြော်ငြာပြီး အိတ်ထဲက ထုတ်ပစ် လိုက်ရတာ။:-))
နေမြဲ ကို မေ့တာမဟုတ်လောက်ဘူး။
တမင် မေ့ချင်ယောင်ဆောင်တာဘဲ ဖြစ်မယ်။ lol:-))
​တော်​​သေးတာ​ပေါ့ လက်​မှားဆွဲတာမို့ ။ အဲ့သလိုမျိုး ​ကောင်​မ​လေး တစ်​​ယောက်​​ယောက်​က ကိုယ့်​ မှားဆွဲတာ မခံရဖူးဘူး မ​ဟုတ်​လား ။ ​ပြော​တော့ပါဘူးကွယ်​ ကိုယ့်​အနက်​​ရောင်​ စာမျက်​နှာ​တွေ ​ပေါ်ကုန်​လိမ့်​မယ်​ ။
အော ဒိုအဘနီတို့မှာလဲ ဇတ်လမ်းရှိသက်ုးးး
၁၉၈၀ ကျော်က ဇတ်လမ်းဟောင်းလေးတွေလုပ်ပါဦးး
မန်းမြေမှာ ခဏတာ တို့
ရေနီမြောင်းနဘေးက အမြဲချောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတို့
ညသန်းခေါင်ကြီး တဟိဟိနဲ့ ရီနေမိတာ အသံမထွက်အောင် မနည်းထိန်းလိုက်ရတယ်…ခေါင်းပြန်မော့တဲ့…
ဒို့အစ်မလည်း ခွင့်တိုင်ထားပေမယ့် သံယောဇဉ်တော့မပြတ်ရှာဘူးနော်
အဲဒီ စကားလေးကြောင့် မြန်မာပြည်ချောက်ထဲဇောက်ထိုးကျတာလို့.. ထင်မိတယ်..
.. စစ်တပ်အယူအဆကြီးကို.. အရပ်ဖက်နိုင်ငံရေးထဲအတင်းသွပ်ထည့်တော့… ရေဘူးထဲ.. ရူရူးတွေပေါက်ထည့်တဲ့ခေတ်ရောက်သွားတာပေါ့…
” ခေါင်း.. ပြန်… မော့… ဗူးထဲက…. ရေ….. သောက်…။ “
မှတ်ချက်။ ။ ကြုံ၍တွန်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကြုံတွန်း…။ မောင်ဆာမိ၏စာနှင့် မသက်ဆိုင်.. :brgreen:
ဘေလေဆပ် .… ဘေလေဆပ် ………
ရှေ့ဒန်းမှာ ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချဉ်တဲ့ ဗိုလ်ဂျီးလုပ်သူ လှံစွပ်ပြောဖို့မေ့ပြီး တက်ထိုးခိုင်းတော့ စစ်သားတွေလည်း ကျားဆိုပြီး ပြေးထိုးကြတာ သေမှာမကြောက်တဲ့ ရန်သူတွေ ထွက်ပြေးပါလေရောလား..
အဲဒီ ဗိုလ်ကြီးလည်း ကျုပ်လိုကောင်ဖြစ်မယ်
တော်သေးတယ် ကျုပ်လည်း စစ်ထဲမရောက်လို့
ရောက်များရောက်ရင် တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးကို ဒုက္ခပေးနေမိမှာ
ဘွတူ ခုမှ တွေ့သကိုး ..
ဟိဟိ .. ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ့လို အချိန်အခါ ၀န်းကျင် လမ်းစဉ်လူငယ် သင်တန်းဆင်းပွဲ မှာ တာဝန်ကျ ဘူးပါရဲ့ ..
တစ်ခါမှ လူရှေ့ ထွက်ဘူးတဲ့ ကောင် မဟုတ်တဲ့ သူကို အရပ်ကလန်ကလား .. အာကျယ်ကျယ် ဆိုပြီး ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်ကောက်ခံ ရပြီး သင်တန်းပြ ရဲ ကြီးက ရှေ့ထုတ်လိုက်ပါရော..
ကဲ အော်စမ်းကွာ ဆိုတော့ … လူယဉ်ကျေး ကထူးဆန်းဆို တော့ သတိ ကို
လို့ ပြောမိလို့ အဆဲ ခံရတာ မိုးမွှန်သွားတာဘဲ ..
ဒါက်ို အမှတ်မရှိတဲ့ ရဲဆရာကြီး က သင်တန်းဆင်းတော့ လည်း လူမလဲ ကျွန်တော့်ကို ဘဲ ဆက်ပြီး ရှေ့တန်းတင်ထားတယ်လေ..
သင်တန်းဆင်း နေ့ အားလုံးလူကြီးတွေ ဆြာကြီးတွေ ရှေ့ မှာ သတိကြီးစွာဖြင့် အဲ့ဒီ့ အမှား ထပ်မမှား ရအောင် ကထူးဆန်းတို့ သတိကြီးကြီးထားပြီး လုပ်တာပေါ့ ဗျာ ။
အားလုံး အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ချီတက် အလေးပြု . သတိ သက်သာ နေမြဲ ဆိုပြီး မိန့်ခွန်းခြွေတာ နာခံပြီး ဆြာကြီးကို အလေးပြု ပြန်ထွက် ရတော့ မဲ့ အချိန် …
ပြီးတော့မယ် အမှား မရှိဘူး ဟ ဆိုပြီးကထူးဆန်းတို့ ၀မ်းသာအားရ အော်လိုက်တာ ပေါ့ဗျာ …
တပ်ဖွဲ့ … ချီတက် အလေးပြု ရန်…… ဘယ်လှည့် …… ဆို ပြီး
အဲ့ဒီ့မှာ လွဲ တော့တာဘဲ ဗျိူ့  ……
ဘာဖြစ်သွားတာလဲ သိလား … ညာ လှည့် အော်ရမှာ ဘယ်လှည့်အော်မိတယ်လို့ ထင်တယ်ဟုတ် …. ဟုတ်ဘူး ….
နေမြဲ ဆိုပြီး သြ၀ါဒခြွေတာ နာခံ နေရတော့ သတိ ပြန်ပေးပြီးမှ ဘယ်လှည့် အော်ရမှာ သတိ ဆိုတဲ့ အမိန့် မပေးမိတော့ အနောက် က ငတတွေ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘဲ အူကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့ နေမြဲ ကနေ ဘယ်လှည့်လိုက်တာ ရှေ့ က ကျွန်တော် တစ်ကောင်ဘဲ ရှိတယ် လေ ….
ဟားဟား ဖြစ်ရလေ ကိုထူးဆန်းရေ
နေမြဲ ပုံစံကနေ စစ်ရေးပြလူလှည့်နည်းအတိုင်းလှည့်လိုက်တော့အတော်ကို ကို့ယို့ကားယားဖြစ်သွားမှာဘဲ
ဘယ်ညာ မှားလို့ ကောက်ရိုးခြေထောက် မြက်ခြေထောက်ရော အော်ခဲ့ရသေးလားးmrgreen:
ကောင်မလေး လက်က နူးညံ့လားဟင်င်င်င်။
မနေ့က အင်တာဗျူးမှာ အားလုံးပြောပြပြီးပြီဘဲ
အပူအနွေးတော့ နဲနဲကွာပါတယ်ဆိုနေမှ ……
ဟိုက်ရှ် !! ဘာတွေပြောမိပါလိမ့်